छोरी प्रति गर्व गर्दै अमिताभ बच्चनले किन यस्तो लेखे ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
छोरी प्रति गर्व गर्दै अमिताभ बच्चनले किन यस्तो लेखे ?
कुनै पनि पिताका लागी उनीहरुका छोराछोरीको उपलव्धि गर्व गर्ने विषय हुन्छ । बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनले पनि छोरी श्वेता बच्चन नंदाको एउटा सफलतामा खुशी व्यक्त गर्दै ट्वीटर इमोशनल ट्वीट गरेका छन् । अहिले अमिताभ पुत्री श्वेताले लेखेको फिक्सन विधाको प्याराडाइज टोवर भारतमा बेस्ट सेलरको श्रेणीमा पर्न सफल भएको छ । र, यही खुशियालीमा अमिताभले गर्व गर्दै छोरी खास हुन्छिन् भन्दै ट्वीट गरेका हुन् ।
ट्वीटसँगै उनले श्वेताको घुम्टो ओढेको बाल्यकालको फोटो पनि सेयर गरेका छन् । त्यो फोटोसँगै बच्चनले अन्य दुई फोटो पनि सेयर गरेका छन् जसमा प्याराडाइज टोवर बेष्ट सेलर किताबहरुको बीचमा छ । फोटोसँगै अमिताभले भावुक हुँदै लेखेका छन् छोरीको यस्तो सफलता एउटा पिताका लागि गर्वको विषय हुन्छ, छोरी खास हुन्छिन् । घुम्टोदेखि बेस्ट सेलरबन्दा सम्म ।
छोरीको कुरा नकार्न सक्दैनन् अमिताभ
अमिताभका लागि छोरी श्वेता एकदमै प्रिय छिन् । उनी छोरीको कुनै पनि कुरालाई नकार्न सक्दैनन् । श्वेता अमिताभका लागि यति प्रिय छिन् कि श्वेताका हरेक कुरालाई उनी आत्मसात गरिदिन्छन् । हालै करण जोहरको च्याट शो कफि वीद करणमार्फत अभिषेक बच्चनले यस्तो कुराको खुलासा गरेका हुन् । उक्त शोमा बोल्दै अभिषेकले आफु र दिदी श्वेतामध्ये पिताका लागि दिदी खास रहेको पनि बताएका थिए । भारतका प्रख्यात कविमध्येका एक हरिवंश राय बच्चनका पुत्र अभिताम भारतका त्यस्ता सुपरस्टार हुन् जो लामो समयदेखि फिल्मी दुनियाँका छाइरहेका छन् । उनको पुरै परिवार फिल्म उद्योगसँग जोडिएको छ । श्रीमती जया भादुरी पनि एक समयकी चर्चित हिरोइन हुन् । छोरा अभिषेश र बुहारी ऐश्वर्य पनि फिल्ममै सक्रिय छिन् ।
अमिताभको पछिल्लो फिल्म ब्रह्मास्त्र प्रदर्शनको तयारीमा छ । ब्रह्मास्त्र आउँदो डिसेम्बर २० मा प्रदर्शन हुँदैछ । यो फिल्ममा रणवीर कपुर, आलिया भट्ट, मौनी राय, दिव्येन्दु शर्मा र डिम्पल कपडियाले पनि अभिनय गरेका छन् ।